Mamitaka hanana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram | Vaovao momba ny gadget
Blumex | | Tambajotra sosialy, Software
Raha efa mpampiasa Instagram sambatra ianao dia mety manana olona marobe manaraka anao raha niaraka tamin'ny kaonty ianao, fotoana be dia be; fa ny toe-javatra mety tsy hitovizany amin'ireo izay nanao famandrihana vao haingana, angamba fotoana mamoy fo satria tsy misy mpanaraka hafa ankoatry ny havany.
Tsy mila mampiasa fomba fanao tsy ara-dalàna mba hitadiavana laza Instagram, Amin'ity lahatsoratra ity dia hanonona antsipiriany vitsivitsy azonao vakiana izahay mba hanananao mpanaraka (ara-dalàna) bebe kokoa amin'ny kaontinao.
1 Torohevitra tena ilaina hananana mpanaraka amin'ny Instagram
2 1. Nahoana ianao no te hanana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram?
3 2. Farito ny fifantohana amin'ny Instagram
4 3. Famaritana ny mombamomba anao manokana ao amin'ny Instagram.
5 4. Mametraha fitaovana mahaliana foana
6 5. Hashtags ao amin'ny Instagram
7 6. Omeo lanja ny mpanaraka anao ao amin'ny Instagram
8 7. Manaova hevitra miaraka amin'i Statigram
9 8. Fametrahana sary am-pitandremana ao amin'ny Instagram
10 9. Mitandrema amin'ny fampiasana tenifototra ao amin'ny Instagram
11 10. Manalavira ireo izay mivarotra mpanaraka amin'ny Instagram
12 11. Aza adino ny mandray anjara amin'ny mpanaraka anao amin'ny Instagram
Torohevitra tena ilaina hananana mpanaraka amin'ny Instagram
Voalohany indrindra, tsy maintsy milaza isika fa misy "orinasa" maro izay matetika manolotra serivisy mba hananan'ny olon-tsotra mpanaraka maro kokoa, zavatra iray izay tsy mendrika ny hampiharina hatramin'ny ela, Instagram afaka mamafa ny kaontinao noho ny fiheverana fa nandika ny politikan'izy ireo ianao.
1. Nahoana no te hanana mpanaraka bebe kokoa ianao Instagram?
Io no toe-javatra voalohany sy manan-danja indrindra tokony hohalalininao, satria tsy mitovy ny fananana mpanaraka maro fotsiny noho ny antony itadiavana tena fa tsy ilay te hampiroborobo orinasa ianao Misy ihany koa ireo olona izay te hampalaza ny sariny na ny horonantsariny ho malaza noho ny antony sy toe-javatra samihafa.
2. Farito ny fifantohana Instagram
Raha ny voalaza etsy ambony, raha misy olona maniry ny hanarahan'ny namany azy amin'ny tambajotra sosialy, dia afaka mametraka sary tsy misy fetra izy, izany hoe ireo rehetra hisehoan'ny namana na fianakaviana. Fa raha te hampiroborobo sary ho an'ny rehetra ianao fa tsy ho an'ny havana akaiky fotsiny, dia sary (tsy azonao velively) dia tsy tokony hampiseho ny olona ao aminy. Ohatra, ny sarin'ny sakafo irery, satria ny olona mihinana zavatra tsy mahafinaritra ny maro. Fa kosa, ny mpandraharaha iray dia tokony handefa ny sarin'ny orinasa sy ny manodidina azy.
3. Famaritana ny mombamomba anao ao Instagram.
Rehefa mitsidika anao izy ireo, ny zavatra ho hitan'izy ireo voalohany dia ny famaritana amin'ny mombamomba anao ary avy eo dia manapa-kevitra izy ireo raha mahita ny fitaovanao na tsia. Noho io antony io dia ampirisihina ianao hametraka hafatra manintona nefa tsotra ao anatin'ilay mombamomba anao, zavatra iray izay mampiseho fahalianana amin'ireo olona inoanao, izay maniry ny zavatra narosonao. Ka manana hevitra ianao, soraty izay tianao hovakiana amin'ny profil iray hafa mahaliana.
4. Mametraha fitaovana mahaliana foana
Ny sary rehetra dia tokony hahaliana, ary tsy tokony hisy sary mankaleo. Tadidio fa ireo mpitsidika anao dia hijery ireo hafatra farany nataonao, koa raha nametraka zavatra tsy misy dikany ianao dia very mpanara-dia anao fotsiny. Raha tsy manana fitaovana tsara havoaka ianao dia aleo tsy mamoaka na inona na inona amin'io andro io.
5. Hashtags ao amin'ny Instagram
Toy ny ao amin'ny Twitter, ny Hashtags dia manan-danja ihany koa ao amin'ny Instagram, zavatra izay hisarika ny sain'ireo izay mitady karazana piraofilina manokana sy sary iray miaraka.
6. Omeo lanja ny mpanaraka anao ao Instagram
Raha vao manomboka manana mpanaraka ianao dia manomboka manamarina ny mombamomba azy ireo ary mifanerasera amin'izy ireo; Azonao atao ny manaraka ny sasany amin'ny sarin'izy ireo (tsy maro), "Tianao" izy ireo, ary na dia maneho hevitra aza. Ny Fahananao dia hanome sakafo haingana noho io toe-javatra io; fa aza manao an'ity hetsika ity amin'ny olona manaraka anao, satria ny mombamomba anao dia hianjera amin'ny zavatra tsy misy fepetra ary tsy misy tsiro mazava.
7. Manaova hevitra miaraka amin'i Statigram
Ho an'ireo izay tsy te hanao fikarohana sy hevitra mivantana avy amin'ny kaontiny Instagram, Statigram dia mety ho safidy tsara hafa, satria ampiasaina amin'ny Internet amin'ny solosaina rehetra izay mora ampiasaina ny fitendry. Apetraho ny tenifototra ny lohahevitra mahaliana anao sy voila, dia ho hita tsy ho ela ny lisitry ny valiny hojerenao avy hatrany.
8. Fametrahana sary am-pitandremana ao amin'ny Instagram
Hankasitraka ny mpanaraka anao fa tsy totohondryo aminy sary isaky ny mandeha na matetika, noho izany dia asaina vitsivitsy ny sary avoakanao fa mahaliana ho azy ireo, satria izy ireo no hanaraka anao.
9. Mitandrema amin'ny fampiasana tenifototra amin'ny Instagram
Raha mampiasa tenifototra be loatra ianao amin'ny fanamarihana ireo sary dia azo heverina ho toy ny spam izy io, noho izany dia ampirisihina ianao hametraka tag mifandraika fotsiny fa tsy izay tonga ao an-tsainao mba hisarika ny saina fotsiny.
10. Manalavira ireo mivarotra mpanaraka Instagram
Ny zava-misy amin'ny fitomboan'ny mpanaraka tsikelikely Instagram Mety ho antony iray ahazoan'ny mpampiasa sasany manana bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy, ka mankany amin'ireo mivarotra an'ity karazana serivisy ity izy ireo; aza manalavitra azy ireo, satria tsy hahazo vola afa-tsy aminao izy ireo.
11. Aza adino ny mandray anjara amin'ny mpanaraka anao ao Instagram
Mandefasa tsy tapaka mandritra ny herinandro fa tsy izy rehetra ao anatin'ny iray andro; Ary koa, rehefa mahita hevitra avy amin'ny fitsidihanao ianao dia valio izy ireo hitazona ny fahaliananao amin'ny mombamomba anao. Mino izany na tsia, "misaotra" tokana Zava-dehibe ho an'ireo Mpankafy anao izany, satria ny toerana malalaka amin'ny ahiahin'izy ireo dia tsy hampiverina azy ireo.
Fampahalalana bebe kokoa - Instagram izao mamela anao hametraka sary sy horonan-tsary mora foana amin'ny tranokala rehetra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tambajotra sosialy » Tetika 11 hahazoana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram
Halloween dia ankalazaina ao amin'ny PlayStation Store
Safidy manokana: Lalao 5 ankafiziko indrindra ho an'ny iOS